လူတိုင်း မှာ ကိုယ့် ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။ မိမိ ကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင် ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ် ပုဂ္ဂိုလ် စောင့် သလဲ? – Myanmar
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ ပါတယ်။ မိမိ ကို ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေ သလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် စောင့်သလ?
လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားဆုံးတစ်ခု့ ရှိပါတယ်။အရေးကြုံရင် အားကိုးရှာစမြဲပါ ။တခါတရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေတောင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့လာရင် အားငယ်ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတက်ပါတယ်။
အဲ့လို အချိန်အခါ မျိူးမှာ အားက်ုးရှာတက်ပါတယ်။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနန္တော အနန္တ ငါးပါး အား တိုင်တည် တက်သိမှတ်သမျှ ဂါထာ တွေ ရွတ်ပေါ့။
ဒါနဲ့ အားမရဘူး ဆိုပါတော! မိမိ အား စောင့်ရှောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် ရှိတာပဲ.. ဘာအရေးလဲ ? ဘာ ကြောက်ရမလဲ ?မိမိ အစောင့်က ဖယ်ရှား ပစ်လိမ့်မယ်.. ဒီအချက်ကို ကြိုတင်သိပြီး ကိုးကွယ်ချင်မှာပဲ။
မိမိ အား စောင့်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကို မဟာဘုတ် အရ တွက်ကြည့် လို့ရပါတယ် ။မိမိ အား စောင့်ရှောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် ကို ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ပါက ရန်အပေါင်းကင်းကွာ လာဘ်ရွှင် အကျိူးများ ခံစား ရပြီး ။လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝပါလိမ့်မယ်။
မိမိ အား စောင့်ရှောက်သော ပုဂ္ဂိုလ် များ က ကောင်း စွာ စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်…
မွေးတဲ့ ခုနှစ် လ ရက် နေ့ နာရီ တို့ ကို မဟာဘုတ် (၅) ခွင် ချရပါမယ် ။
၂။ မွေးတဲ့လ ကို တန်ခူး လမှ စ ၍ ရေတွက် ရတဲ့ သင်္ချာ ကို (၇) နဲ့ စား ရတဲ့ အကြွင်း ကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူပါ ။
၅။ မွေးတဲ့အချိန်ကို (၇) နဲ့စား ရတဲ့အကြွင်း ကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ ။ ( မိနစ်စွန်းလျှင် နာရီ မှာ (၁) တိုးရပါမယ် )
၆။ အဲ့ဒီ မဟာဘုတ် (၅) ခွင်မှာ မူလ ဘုတ် ဟောခွင် ( မူလ သက္ကရာဇ် မွေးနံ ) ဋ္ဌာန က ဂြိုလ် လေး လုံး ကို ယူ ပြီး သင်္ချာအရ ပေါင်း မွေးနံပါ သင်္ချာကို ပါ ထပ်ပေါင်း ပြီးရင် (၇) နဲ့စား ပါ ။ရတဲ့ အကြွင်း ကို မဟာဘုတ် တိုင် ပြန်ထူပါ ။
အဖြေ ဟောကိန်း တွေကတော့?
တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ထွက်ရပ်ပေါက် လူပုဂ္ဂိုလ် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ကြီးများ .. ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘဝ က ဖခင် .. အတိပ်ဘဝက ဖခင်.. ဝိဇ္ဇာကြီးများက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
တနင်္လာ… ဖြစ်ခဲ့ရင် ကွမ်ရင်မယ်တော် ဘဝဟောင်းကမိခင် လက်ရှိဘဝမှာ ကွယ်လွန်သွားသောမိခင် ကြီးဒေါ် အဒေါ် လက္ခုမီး မယ်တော် များ ကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။
အင်္ဂါ …. ဖြစ်ခဲ့ရင် အောက်နတ်(၃၇)မင်း ဇော်ဂျီ များ ရုက္ခစိုးများ မကျွတ်မလွပ်သူများ ( ပရလောက သား များ ) စန္ဒီမယ်တော် ဂန္ဓဗ္ဗ နတ်မင်းများကစောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
ဗုဒ္ဓဟူး …. ဖြစ်ခဲ့ရင် ဝိဇ္ဇာကြီးများ ( ထုံကျင့်ရပြီးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး ) ရေစောင့်နတ် ရွာစောင့်နတ်ရုက္ခစိုးနတ် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ် များ စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
ကြာသပတေး … ဖြစ်ခဲ့ရင် ဗြဟ္မာကြီးများ ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှင်သီဝလိ ရှင်ဥပဂုတ္တ ရှင်ဗာကူလ စသော ရဟန္တာများ အထက်လမ်း ဂိုဏ်း ဆရာများပြဒါးဝိဇ္ဇာ အင်းဝိဇ္ဇာ များကစောင့်ရှောက် ပါတယ်။
သောကြာ… ဖြစ်ခဲ့ရင် သူရဿတီ မယ်တော်သံသေဝိဇ္ဇာကြီးများ မိခင်ဘက် က အဖွား ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ် တဲ့ သမီးမယ်တော် များ စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
စနေ … ဖြစ်ခဲ့ရင် (၃၇) မင်း အောက်နတ်များ မကျွတ်မလွပ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ် ( ပရ လောကသား မိမိနှင့်ဆွေမျိူးတော်စပ်ဘူးသူ )လောကီ ကျင့်စဉ် နဲ့ကျင့်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များသမထ နဲ့ ကိစ္စ ပြီးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များစောင့်ရှောက်ပါတယ် ။ယုံကြည်ခြင်း မယုံကြည်ခြင်း သည် သင့်နှင်သာဆိုင်ပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဖြစ်လိုသော post တစ်ပုဒ် ဟုမှတ် ယူပါ….။
လွန်ခဲ့သော (၁၈) နှစ်က သင်ကြားပြသပေးသွားပါသော ဆရာအား ဦးညွှတ်လျက်။မြတ်မို